Maso Arabo: Ny Dia An-tsary Tany Afovoany Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2017 2:00 GMT
Ny famoahana ireo sarin'ny moskea tao amin'ny bilaogin'izy ireo no tena mahaliana indrindra, izay mampiseho amin'ny antsipirihany ny nanaovana ny maritrano sy ny famolavolana ny toeram-pivavahana hireharehana toy izany. Amin'ny ankapobeny, namoaka sary avy amin'ireo moskea miisa fito tao an-tanàndehibe i BRN, eo ho eo amin'ny 120km miala an'i Dubai eo.
Tsy lavitra an'i Arabia Saodita, mitondra antsika mankany amin'ny toerana mahafinaritra hafa ilay bilaogera Mohammed Fares any anivon'ny tany efitra. Entiny mankany Jebel Baloum isika amin'ity indray mitoraka ity – tendrombohitra iray manana haabo 1045 m avy amin'ny ranomasina any amin'ny tendrony avo indrindra ary anisan'ny andiana tendrombohitra Tuwaiq.
Fares , izay geocacher (mpitrandraka toerana miafina amin'ny alàlan'ny zanabolana) indray mitondra antsika miaraka amin'ireo rahalahiny mitady ireo toerana miafina any amin'ireo toerana mahaliana.
Mandritra izany, nandefa ity sary ity miaraka amin'ny fialantsiny ho an'ireo vehivavy izay mety ho voantohintohina ilay bilaogera Libaney Fonzy izay monina ao Koety. Raha ho ahy manokana, tsy hitako ny antony tokony maha voatohintohina ny vehivavy rehefa mahita io sary io. Manaja tanteraka ity lehilahy/vehivavy natsipy anaty fako ity aho izay tonga niaraka tamin'ny taratasy fametaka ho an'ny fiara ary nanapa-kevitra ny hametaka izany amin'ny fiarany ireo hafa rehetra!
Mbola any Koety main-tany ihany, hamaranantsika azy ny lahatsoratr'i Pepsi-Guy izay namoaka ny sarin'ny zava-pisotro misy alikaola voarara amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny fireneny eo ambanin'ny lohateny hoe: Zava-pisotro misy Alikaola Ara-dalana ao Koety! Mazava ho azy fa vazivazin'ny Fetin'ny Lainga Volana Aprily izany!
Ao Bahrain ny fiatoantsika farany amin'ity herinandro ity, izay ahitana ilay bilaogera Mahmood Al Yousif manao fahazarana mandefa ny sary avy ao an-jaridainany isaky ny Zoma. Azonao jerena ato ny lisitra feno ahitana ireo sariny isaky ny zoma.